စွဲငြိဖွယ်ရာ - စာမျက်နှာ 20 - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: immersive (စာမျက်နှာ 20)
iZotope ကြေညာချက်များ RX Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Suite နှင့် RX5ပေး Audio Editor ကို
IBC 2015 (8.D70 ရပ်), iZotope, Inc, တစ်ဦးဦးဆောင်အသံနည်းပညာကုမ္ပဏီ, အထူးသ, ပိုကောင်းပြင်ဆင်ရန်မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို enable ရောမွှေ, သူတို့၏အသံကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်း tools တွေကိုတစ်ဦးပြည့်စုံ suite ကိုင်သစ်ကို RX Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Suite ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်မှာ အဖြစ် RX5ပေး Audio Editor ကို၎င်း၏ RX ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသိသာသစ်ကို update ကို။ အသစ် RX Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Suite ...
matrix Solutions နှင့် BIA / Kelsey မီဒီယာကြော်ငြာကြည့်ရန်မိတ်ဖက်ကြေညာ
Pittsburgh, PA - စက်တင်ဘာလ 11, 2015 - Matrix Solutions, မီဒီယာဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM) ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးနဲ့အရောင်းထောက်လှမ်းရေးဆော့ဖျဝဲ, ယနေ့ BIA / Kelsey တစ်ဦးဦးဆောင်သုတေသနပြုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုမဟာမိတ်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသီးသန့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် ဒေသခံမီဒီယာ။ မိတ်ဖက်ခုနှစ်, BIA မိမိတို့၏မီဒီယာကြော်ငြာကြည့်ရန်ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူဒွန်တွဲ / Kelsey ရဲ့အသိပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု, ပိုကောင်းတန်ဖိုးကိုကယ်နှုတ်မည် ...
NewTek အဆင့်မြင့် IP ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Redefines
IBC7မှာ NewTek ™ NewTek အဆင့်မြင့်အိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ဦးအမြော်အမြင်သရုပ်ပြနှင့်မည်သည့်အတွက်ထုတ်လွှင့်စခန်းများနှင့်ကွန်ယက်များ, စတူဒီယိုအဆောက်အဦနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုဌာနကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပါရာဒိုင်း groundbreaking ပါလိမ့်မယ် - အမ်စတာဒမ်, IBC 11.K10 စက်တင်ဘာလ 2015, 2015 ရပ် ကုမ္ပဏီအိုင်ပီအနာဂတ်တစ်ခုချက်ချင်းတံခါးပေါက်။ ဤသည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးပြီးသားထောင်ပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီအတွက်ချထားကွန်ပျူတာ / IP ကို-based နည်းပညာနှင့်အတူ NewTek ရဲ့နက်ရှိုင်းသောအတှေ့အကွုံပျေါ၌တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များနေထိုင်ကြသည်။ NewTek ...
RTW'S TouchMonitor TM9 အာဖရိကဖို့ခရီးဖန်ဆင်းပြီ
တောင်အာဖရိက, စကျတငျဘာ 9, 2015 - RTW, အမြင်အာရုံအသံမီတာတစ်ဦးဦးဆောင်ရောင်းချသူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများအတွက် devices တွေကိုစောင့်ကြည့်, တောင်အာဖရိကအတွက် SuperSport များအတွက် TouchMonitor TM9s ပေးရှေးခယျြခဲ့သညျ။ SuperSport ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြား (DStv) ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အာဖရိကတိုက်ကြီးအနှံ့အားကစားအကြောင်းအရာများ၏အဓိကငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စုစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ...
IBC မှာ SSL ကို Introduces '' စနစ် T က '' network ကိုထုတ်လွှင့်ပေး Audio ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ
အစိုင်အခဲပြည်နယ် Logic, ဖန်တီးမှုအသံပညာရှင်များများအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး IBC 2015 မှာ System ကို T က (ခန်းမ 8, D83 ရပ်) ကိုကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ အနာဂတ်မောင်းနှင်နေတဲ့ '' Multi-Platform ကိုဖြန့်ဝေ '၌အကြီးစားဘဏ်ဍာကိုင်တွယ်ရန်ပါဝါပေးတက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်း, System ကို T ကအသစ်တစ်ခုကိုအပြည့်အဝကွန်ယက်ထုတ်လွှင့်အသံထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အကွာအဝေး ...
EditShare Flow ထုတ်လုပ်မှု Asset Management တွင် 4K ထုတ်လုပ်မှု, Remote အယ်ဒီတာ့အာဘော် Workflows နှင့် New Automation စှမျးကိုအားပေးအားမြှောက်
Expanded format ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အဓိကအလိုအလျောက်စွမ်းရည် 4K transcoding Workflows ရိုးရှင်း; တိုးမြှင့် Airflow module ကိုဝေးလံသောပူးပေါင်း IBC2015 စာနယ်ဇင်းကြေညာချက် 7.G37 Basingstoke, ဗြိတိန်ရပ်ထဖွင့်လှစ် - စက်တင်ဘာလ 9, 2015 - EditShare, အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ 4K နှင့်ဝေးလံခေါင်သီအယ်ဒီတာအဖွဲ့ Workflows ထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ် EditShare Flow, ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်လုပ်မှု၏ ...
အဆိုပါ VCR ထံမှ DVR မှ Netflix ၏မြင့်တက်လာရန်, နည်းပညာအဆက်မပြတ်သူတို့ကစောင့်ကြည့်ချင်သလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ချင်သောအရာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါကြည့်ရှုပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးစေခြင်းငှါပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လွှဝန်ဆောင်မှုများကိုသခြောသောအကြောင်းအရာများကို '' ဝယ်လိုအားအပေါ် '' တက်ဖမ်း 'နှင့်အသက်အတွက် ushering နေစဉ်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ထံမှ linear တီဗီအတင်းအကျပ်, အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ ...
IBC 2015 ပွဲဦးထွက်ဘို့ဥရောပဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် '' Pix-E စီးရီးခေါင်းဆောင်များ
အမ်စတာဒမ်, စကျတငျဘာ 8, 2015 - ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ကဖွံ့ဖြိုးပြီးဗီဒီယိုအားထုတ်ကုန်၏အမှတ်တံဆိပ် IBC4(ခန်းမ 2015, B8 ရပ်) မှ Pix-E စီးရီး 59K မှတ်တမ်းတင်လယ်ကိုမော်နီတာနှင့် accessories များက၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဥရောပပွဲဦးထွက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Pix-E စီးရီးနှစ်ခုငါးလက်မမော်ဒယ်, Pix-E5 နှင့် Pix-E5H အဖြစ်ခုနစ်လက်မ Pix-E7 ပါဝင်သည်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် ...
ပထမဦးစွာနည်းဥပဒေ Exterity ၏ဗီဒီယို streaming များဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ၎င်း၏မီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းပြသ #IBC2015
စိန့်လူးဝစ္စ, MO ကို skyline တစ်ခု Ultra-ခေတ်မီကြည့်နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art ဗွီဒီယိုနဲ့အသံပစ္စည်းကိရိယာများ၏မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောနှင့်အတူဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုနိဒါန်း, ပထမဦးစွာနည်းဥပဒေရုပ်ရှင်ပွဲတော် & အသံလွှင့် (Pelopidas LLC ၏ဌာနခွဲ) ကမြို့ရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည် စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာထုတ်လုပ်မှု, အင်္ဂါရပ်-ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့ web အကြောင်းအရာနှင့် post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်န်ဆောင်မှုများအပါအဝင် high-definition ရုပ်ရှင်နဲ့ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများအတွက် -stop ဆိုင်။ ၎င်းပြင် ...
ခြိုး NEWS: အမေဇုံက Web Services ကဒြပ်စင် Technologies က #IBC2015 ကိုဆညျးပူးဖို့
အမေဇုံက Web Services က, Inc (AWS), တစ်ဦးကို Amazon ကုမ္ပဏီ, ယနေ့အမေဇုံ multiscreen အကြောင်းအရာပေးပို့များအတွက် software ကို-defined ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဒြပ်စင် Technologies က, Inc, ရှေ့ဆောင်တွေဆည်းပူးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဝယ်ယူအတူတကွထိထိရောက်ရောက်နဲ့စီးပွားရေးအရစကေးမှဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများမှပေးဖို့ AWS တိမ်တိုက်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူဒြပ်စင်ရဲ့ဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုဖြေရှင်းချက်ဆောင်တတ်၏ ...
SGL IBC 2015 ကို AT နည်းပညာအသစ်နှင့်အဓိက third-party ပူးပေါင်းခြင်းစီမံကိန်းများကိုကြေညာ
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အကြောင်းအရာ archive ကိုနှင့်သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ SGL တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ရပ်တည်ချက် 2015.J7a အပေါ် IBC 15 မှာနည်းပညာအသစ်နှင့်အဓိက Third-party ပေါင်းစည်းမှုစီမံကိန်းများကိုတစ်အရေအတွက်ကိုကြေညာသည်။ SGL ၏ Open System ကိုဗိသုကာသိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အရွယ်မှာဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်, post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, သတင်း / အားကစားအဖွဲ့အစည်းများပေးပါသည်။ SGL တိုက်ရိုက်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် ...
Wisycom MAT288 programmer RF ပေါင်းစပ်နှင့် MFL Fiberbox BX1-4U IBC 2015 မှာဥရောပပွဲဦးထွက်ကို
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, သြဂုတ် 31, 2015 - ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ Wisycom, ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆောက်ခြင်း, 2015 IBC ပြရန်များအတွက်ဥရောပ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့နှစ်ခုထုတ်ကုန်ဖော်ပြရန်လိမ့်မည် - MAT288 programmer RF ပေါင်းစပ်နှင့် MFL Fiberbox BX1-4U ပြင်ပတွင် RF-ကျော်-Fiber ဖြေရှင်းချက် (8.D78 ရပ်) ။ အဆိုပါ MAT288 များအတွက်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း configurations ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ် ...
AccuWeather ဟာရီကိန်းကက်ထရီနာ၏ 10th နှစ်မြောက်သတိရတဲ့
ဟာရီကိန်းကက်ထရီနာအတွက်အကုန်အကျအများဆုံးကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ငါးအသေအပျောက်အများဆုံးဟာရီကိန်း၏တဦးတည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကက်ထရီနာပထမဦးဆုံးဖလော်ရီဒါအတွက် Hallandale သဲသောင်ပြင်များနှင့် Aventure မှာသြဂုတ်လ 25, 2005 အပေါ်လန်းဖောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းသို့အားနည်းခြင်းနှင့်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထိုအရပ်မှ, အဲဒါကိုတစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းမတိုင်မီအားနည်းပြီးတော့တစ်ဦး Category:5ဟာရီကိန်းသို့ခိုင်ခံ့စေ၏ ...
Adobe က MAX 2015: Creative နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ
Los Angeles မြို့,, CA အတွက်အောက်တိုဘာလ 2015rd-3th အပေါ်ကို Adobe MAX7 ညီလာခံမှာအရပျကိုယူပြီးခံရဖို့သွားသမျှသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! အဆိုပါစပီကာလိုင်းတက်မင်းသား, စာရေးဆရာနစ်ခ် Offerman နှင့် Filmmaker Baz Luhrmann အပါအဝင်တင်ပြ၏ရှည်လျားသောစာရင်းနှင့်အတူ "မီးပွား" အတိုးဖို့သေချာပါ! ဖြစ်ခြင်းအစည်းအဝေးများရာပေါင်းများစွာ, ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစာသားရှိပါတယ် ...
DIRECTV NFL ပရိသတ်များမှစီး!
ဒါကြောင့် NFL ဘောလုံးရာသီအကြှနျုပျတို့အပျေါတစ်ဖန်သည်နှင့် DIRECTV, ထိုတွင် AT & T ကမိသားစု၏ယခုအပိုင်းမှာရှေးရှေးသိသိသာသာတစ်ဦးဂြိုဟ်တုစလောင်းတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲပိုပြီးပရိတ်သတ်တွေဖို့ NFL တနင်္ဂနွေလက်မှတ်၏ရရှိမှုတိုးချဲ့ပွီ! ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးသန်းဖောက်သည်ယခုလူကြိုက်များ NFL ရဲ့သီးသန့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များဗားရှင်းရှိနိုင်ပါသည်ထက်ပိုဆိုလိုတယ် ...
3 မျက်နှာပြင် Solutions Next ကိုမျိုးဆက်တီဗီ Apps ကပကယ်ယူနိုင်ရန် Metrological ရွေးချယ်
3 မျက်နှာပြင် Solutions Metrological Next ကိုမျိုးဆက်တီဗီ Apps ကပမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ဦးဆောင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတီထွင်3မျက်နှာပြင် Solutions ကယ်ယူရန်အတွက်ရွေးချယ် GmbH & Co. , KG အဆိုပါ Metrological ပိုမိုနှစ်သက်အကြောင်းအရာမိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကိုပူးပေါင်းမည်နှင့် app များကိုမိတ်ဖက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Metrological လျှောက်လွှာပလက်ဖောင်းများနှင့် SDK ကိုရွေးချယ်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကိုကူညီခြင်းနှင့်အော်ပရေတာ-TV ကိုပေးချေမည် ဒီဇိုင်းကိုကယ်နှုတ်သောဆန်းသစ် App အသစ်များနဲ့ app အကြောင်းအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက် ...
20 ၏စာမျက်နှာ 22«ပထမဦးစွာ...10«1819202122	»